Dowlad Goboleedyada oo baaq wadajira ka soo saaray xaaladda dalka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowlad Goboleedyada oo baaq wadajira ka soo saaray xaaladda dalka
Madaxweyne-yaasha Dowlad Goboleedyada ayaa xalay khadka teleefanka uga wadahadlay xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee dalka.
Madaxweyne-yaasha Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa si wadajir ah u soo saaray warsaxaafadeed ka kooban toddobo qodob.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ka xun yihiin khilaafka soo noqnoqday ee Hay’adaha Federaalka, kaasi oo liddi ku ah danta qaranka, horseedi karana xasillooni darro iyo dib u dhac Dowladnimada Somaliya, xilligan kala guurka.
Sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Madaxda Dowlad Goboleedyada ay 21-23 bishan shir isugu imaanayaan Magaalada Garoowe, si ay kaga arrinsadaan dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka.
Warsaxaafadeedka ayaa u qornaa;-
Previous articleRooble oo war ka soo saaray shaqo joojintii Madaxweynaha
Next articleMidowga Musharaxiinta oo ku baaqay in meel looga soo wada jeesto Farmaajo